Breaking News: मोदीलाई ठुलो झट्का : भारतीय नागरिक चिनियाँ सेनाको कब्जामा परेपछि, भारतभर चल्यो रुवावासी !
अन्तर्राष्ट्रिय Breaking News: मोदीलाई ठुलो झट्का : भारतीय नागरिक चिनियाँ सेनाको कब्जामा परेपछि, भारतभर चल्यो रुवावासी !
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: भारत र चीनबीच तनाव बढिरहेका बेला चिनियाँ सेनाले ५ जना भारतीय नागरिकलाई कब्जामा लिएको भन्दै भारतीय सेनाले एक सन्देश पठाएको छ । भारतीय सेनाका अनुसार उनीहरूलाई सीमावर्ती भारतीय राज्यबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । दुई दिनअघि अरुणाचल प्रदेशका एक सांसदले ट्वीट गर्दै ५ जना भारतीयलाई चिनियाँ सेनाले नियन्त्रणमा लिएको आ’रोप लगाएका थिए ।
सांसद तापिर गाओले ट्वीट गर्दै सेप्टेम्बर ३ मा सीमा क्षेत्र नजिकै ५ जना नागरिकलाई चिनियाँ सेनाले कब्जामा लिएको आरोप लगाएका हुन् । यद्यपि, उनले त्यसबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसपछि एक भारतीय मन्त्रीले चिनियाँ सेनालाई ‘हटलाइन सन्देश’ पठाइएको बताएका छन् । अल्पसंख्यक कार्य राज्यमन्त्री किरेन रिजिजुले सीमा तनाव अन्त्यका लागि सन्देश पठाइएको जनाए ।
चीनले सीमा क्षेत्रमा सैन्य त’नावका लागि उक्साउने काम गरिरहेको आरोप भारतले लगाएको छ । भारतले अगस्ट पहिलो सातामा दुईपटक यस्तो आरोप लगाएको थियो । तर चीनले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सीमाक्षेत्रमा जारी त’नाव अन्त्यको पहलका लागि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दुई दिनअघि रुसको राजधानी मस्कोमा चिनियाँ समकक्षीलाई भेटेका थिए ।
त्यसले चाँडै तनाव कम गराउन संवाद अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि दुई देशबीचको वाक्युद्ध जारी छ । चीनले सीमा क्षेत्रको तनावका लागि भारत ‘पूर्णरूपमा’ जिम्मेवार रहेको आ’रोप लगाउँदै आएको छ भने भारतले ‘आफ्नो एक इन्च भूभाग पनि नछाड्ने’ बताएको छ ।
त्यसका साथै चीनले सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सैनिकहरू परिचालन गरेको र उनीहरूले आ’क्रामक व्यवहार देखाएको भारतीय आरोप छ । दुवै देशले बारम्बार एकअर्कालाई हिमालय क्षेत्रको लद्दाखमा सीमा पार गरेर हिंसा भड्काउन खोजेको आ’रोप लगाउने गर्छन् । विश्लेषकहरूले जुनदेखि सीमा क्षेत्रमा संवेदनशील अवस्था रहेको बताउने गरेका छन् ।
दुई देशबीच विभिन्न चरणमा सैन्य र कूटनीतिक वार्ताहरू भए पनि परमाणु समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन । भारत र चीनबीच करिब ३ हजार ५ सय किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । त्योमध्ये करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा दुई देशबीच दशकौंदेखि वि’वाद रहँदै आएको छ । कतिपय भूभागमा त दुवै देशले आफ्नो दा’बी गर्दै आएका छन् । सीमा विवादलाई नै लिएर सन् १९६२ मा भएको यु’द्धमा भारतले नराम्रो पराजय भो’गेको थियो